dgn - Peeji nke 6 - Geofumadas
Mepụta igbe nke bearings na anya site na nhazi UTM
Ozi a bụ nzaghachi nye Diego, site na Paraguay, onye jụrụ anyị ajụjụ a: ọ bụ ihe obi ụtọ ịkele gị ... nwa oge gara aga maka nyocha m rutere na weebụsaịtị gị na mberede ma achọta m na ọ na-atọ ụtọ, maka ọdịnaya na maka funzọ dị ụtọ iji kọọrọ gị sayensị M ga-ajụ gị, ọ bụrụ na ị maara ihe ọ bụla ...
obodo 3D Coupons DGN dwg
Olee otú Ebube na-esi dị ọnụ ala
Nke a bụ ụfọdụ nkwubi okwu m ruru banyere atụmatụ Manifold ji mee ọnụ ala, ịghara ịkwa emo banyere ikike ya. Eziokwu bụ na azụmaahịa teknụzụ Ha anaghị enye akwụkwọ ntuziaka, akwụkwọ ntuziaka bụ dijitalụ ... ha na-arụ ụka na n'ihi ụwa na-agbanwe agbanwe ...
blog DGN dwg manifold GIS
Gill GIF, nchịkọta nke kacha mma
Anọ m na-eji usoro Manifold ntakịrị ihe karịrị otu afọ, yabụ mgbe ọtụtụ post sitere na ahụmịhe m na iji sọftụwia a, nke a bụ nchịkọta nke kachasị mma. Georeferencing maapụ na onyonyo Ejila CAD ihe mmemme GIS na-eme Georeferencing a dwg / dgn map Otu esi eme ka eserese a na-enyo enyo ...
Georent a map dwg / dgn
Anyị ga-eji ihe omumu a kọwaa ụfọdụ ajụjụ n'ụzọ banyere otu esi ekenye ntanye na maapụ CAD. Anyị ga-eji ihe atụ ewuru na mbụ, nke anyị mepụtara ntaneti UTM nke mpaghara 16 north site na mpempe akwụkwọ ma wuo ya na AutoCAD. 1. Nkeji. Nke a bụ isi nsogbu mgbe ...
AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, Google Earth / Maps, manifold GIS, Microstation-Bentley
Nke ahụ na-ewetara gị ezigbo AutoCAD 2009
N'oge na-adịbeghị anya anyị kwurula banyere mmelite nke AutoCAD 2008 na AutoDesk amalitelarị ụfọdụ ndozi nke mbipute 2009 a maara dị ka AutoCAD Raptor ga-enwe ... ọ bụ ezie na mgbe anyị matara akụkọ ihe mere eme na 25 afọ anyị maara na nke a abụghị afọ nke mgbanwe ọzọ karịrị etemeete. 1. Banyere Ọrụ na ...
Ezinụlọ CadCorp nke ngwaahịa
N'oge na-adịbeghị anya anyị gosipụtara ezinụlọ ụlọ ọrụ ESRI nke ngwaahịa, ma ArcGIS maka desktọọpụ na mgbakwunye ndị kachasịkarị. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ezinụlọ ngwaahịa CadCorp, na nke a ngwa desktọọpụ. Otu n'ime isi okwu CadCorp bụ nkwụsi ike ya na ịkwado ụkpụrụ Open Gis Consortium (OGC) ...
27 Afọ Microstation
N'oge na-adịbeghị anya anyị kwuru banyere mbata nke AutoCAD na afọ 25 ya na ihe mmụta 6 mụtara site na akụkọ ntolite ya. N'ihi na Microstation bụ otu n'ime nyiwe CAD nwere nnukwu asọmpi n'ahịa a, yana site na otu n'ime mmadụ ole na ole na-adị ndụ site na usoro usoro ọ bụla AutoCAD nwetara ...
Mkparịta ụka Mkparịta ụka Bentley
Onye biara nso nso na-ajụ ebe ndị ọrụ Microstation, ma ọ bụ ngwa Bentley dị iche iche na-achọta enyemaka. Nke a bụ ndepụta nke ebe mkparịta ụka dị iche iche, ebe a na-ajụ ajụjụ na ndị ọrụ ndị ọzọ na-aza: Ndị ọrụ n'asụsụ ndị ọzọ ma ọ bụ mba bentley.espanol (Spanish) bentley.mx (Mexico) bentley.general (English) bentley.general.de (German) bentley.general.fr (French) bentley.general.jp (Japanese)…
Mee usoro ihe omuma di iche iche (MDT / DTM) na Microstation ma gbasaa orthophoto
Na mbụ anyị na-ahụ otu esi eme DTM, yana akara contour na AutoCAD iji mepụta akara ngosi. Ezigbo ihe omume iji mee nke a bụ GeoPack, site na Microstation bụ nke ya na Civil3D si AutoDesk, enwere ike ime ya na Descartes, nke ya na AutoCAD Raster Design. Site na mmemme ndị a ị na-echekwa ...
Kedu ihe AutoCAD 2008 nwere ọzọ?
Ezigbo ajụjụ, ọ bara uru ịkwaga ... ma ọ bụ mejuputa ọhụụ ọhụụ ọhụụ? Ka anyị hụ ụfọdụ n'ime ndozi ndị a: Na nsụgharị 2006-2007, anyị ahụla mmụba na njikwa nke ihe mgbochi dị egwu, ịdị ike dị egwu, na njedebe nke usoro usoro ihe omume. Na 2008 anyị nwere ike ịhụ: njikwa njikwa na ...
Nchịkọta mbupụ site na CAD ka txt
Ka anyị chee na anyị chọrọ ibupụ isi site na usoro CAD, gaa na ndepụta ndepụta iche iji bulite na ọdụ zuru oke ma rụọ ọrụ saịtị. Na mbụ anyị ahụla otu esi ebubata ha site na Excel ma ọ bụ txt na AutoCAD na Microstation, ugbu a ka anyị hụ otu esi ebupụ ha. E nwere ụzọ dị iche iche esi eme ya, dịka ịgụta ehi, ...
Ebe Google Analytics na-ekwu na enwere ndị ọrụ AutoCAD na-ajụ maka nke a, lee ụfọdụ azịza ngwa ngwa. A na-eme arụmọrụ ndị a niile site na Microstation, ọ bụ ezie na e nwere ụzọ iji mee ya na bọtịnụ ma ọ bụ iwu akara (isi na) anyị ga-eji ngwọta menu. 1. Etu esi ebufe faịlụ site na Microstation (dgn) na AutoCAD (dxf ma ọ bụ dwg)? Faịlụ / chekwaa ...
Obere ihu Page 1 ... Page 4 Page 5 Page 6